I-China Wear Resistant Steel Plate yoMvelisi kunye noMthengisi | UKunda
Iipleyiti zensimbi ezinganyangekiyo zibhekisa kwiimveliso zepleyiti ezikhethekileyo ezisetyenziswa phantsi kweemeko zokunxiba kwindawo enkulu. Okwangoku, iipleyiti zentsimbi ezinxitywayo ezingasetyenziswanga ziipleyiti ezenziwe ngesinyithi esisezantsi esine-carbon okanye isinyithi esine-alloy encinci enobungqingqwa obuhle kunye neplastikhi ngokufaka iwelding ngobungqingqwa obunobungqingqwa obunobunzima bokunxiba obunqabileyo obunobunzima obuphezulu kunye nokumelana nokunxiba okugqwesileyo imveliso.
Ubunzima bomphezulu bunokufikelela kwi-HRc58-62
Cnina I-NM360. I-NM400. I-NM450, i-NM500
Swiden HARDOX400, HARDOX450.HARDOX500. IHARDOX600, i-SB-50, i-SB-45
QUARD400, QUARD450. AMANQAKU AMANE00
Fransi I-FORA400. I-FORA500, iCreusabro4800. ICreusabro8000
Finlend: RAEX400, RAEX450, RAEX500
Japhan I-JFE-EH360, i-JFE-EH400, i-JFE-EH500, i-WEL-HARD400, i-WEL-HARD500
MN13 High manganese banxibe-enganyangekiyo ipleyiti yesinyithi: Umxholo manganese yi-130%, nto leyo malunga namaxesha ali-10 yentsimbi eqhelekileyo banxibe enganyangekiyo, kwaye ixabiso eliphezulu noko.
Ukutyeba Ubungakanani obuqhelekileyo: 8/10/12/14/16/18/20/25/30/40/50/60
ububanzi Ubukhulu obuqhelekileyo: 2000 / 2200mm
Ubungakanani obuqhelekileyo: 8000/10000/12000
2.Ipleyiti yokunxiba enganyangekiyo:
Yimveliso yepleyiti eyenziwe ngokugqobhoza ubungqongqo obunobunkunkqele obunxibayo obunobunzima obuphezulu kunye nokumelana nokunxiba okugqwesileyo kumphezulu wesinyithi esiqhelekileyo okanye intsimbi ephantsi enobulukhuni kunye neplastikhi. Umaleko wokulwa nokunxiba ngokubanzi ubala i-1 / 3-1 / 2 yobunzima obupheleleyo.
l umaleko banxibe-enganyangekiyo ikakhulu yenziwe ingxubevange chromium, kunye nezinye izinto ingxubevange ezifana manganese, molybdenum, niobium, kunye nickel nazo zongezwa.
IBakala + 3 + 3、4 + 2-5 + 3-5 + 4-6 + 4-6 + 5-6 + 6-8 / 4-8 + 5-8 + 6、10 + 5-10 + 6-10 + 8-10 + 10-20 + 20
Iinkonzo ze-3 ziyafumaneka
Ukunxiba iipleyiti ezinokubonelela ngeendlela zokuqhubekeka: iindawo ezahlukeneyo zokusika isinyithi, i-CNC yokusika izihlalo, i-CNC machining flanges, iinxalenye zearch, iinxalenye ezifakiwe, iinxalenye ezikhethekileyo, iinxalenye zeprofayili, izinto, izikwere, imitya kunye nokunye ukuzoba.
4.Ukusetyenziswa kwepleyiti yokunxiba
1) Isityalo samandla ashushu: isantya esiphakathi samalahle esilinda yesilinda, ifolk yokufaka ifeni, umqokeleli wokungena kothuli, umbhobho womlotha, isinqumleli somxokelelwane webhakethi, isahlulo sokudibanisa umbhobho, isaladi yokulahla amalahle, amalahle amalahle kunye nesityumzi Umatshini wenqanawa, isitshisi sokutshisa, ukuwa kwamalahle i-hopper kunye ne-funnel liner, i-preheater yomoya yokukhusela i-bracket tile, isahluli sesikhokelo sesahluli. La malungu angentla awanazo iimfuno eziphakamileyo kubulukhuni kunye nokunxiba ukuxhathisa kwepleyiti yensimbi yokunxiba, kwaye ipleyiti yesinyithi enxibayo enobunzima be-6-10mm kwizinto ze-NM360 / 400 inokusetyenziswa.
2) iyadi yamalahle: isitya sokutyela kunye ne-hopper lining, i-hopper lining, i-fan blade, i-pusher ipleyiti esezantsi, umqokeleli wothuli, ityhubhu yesikhokelo se-coke, i-ball mill lining, i-drill stabilizer, i-screw feeder bell kunye ne-Seat Seat, i-lining yangaphakathi yebhakethi iringi feeder, yokulahla truck ezantsi ipleyiti. Indawo yokusebenza yeyadi yamalahle ingqongqo, kwaye kukho iimfuno ezithile zokumelana nokubola kunye nokunxiba ukunganyangeki kwepleyiti yensimbi enxibayo. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ipleyiti yentsimbi enxibayo ye-NM400 / 450 HARDOX400 enobunzima be-8-26mm.
3) Isityalo sesamente: i-chute lining, isiphelo se-bushing, umqokeleli wothuli, i-powder separator blade kunye ne-blade yesikhokelo, i-fan blade kunye ne-lining, ukuphinda usebenzise i-emele i-emele, isitya sokuhambisa esisezantsi, indibano yombhobho, i-frit yokupholisa ipleyiti, i-conveyer liner. Ezi ndawo zifuna iipleyiti zensimbi ezinxibayo ezinganyangekiyo kunye nokumelana nokubola, kunye neepleyiti zensimbi ezinxibayo ezenziwe nge-NM360 / 400 HARDOX400 ngobunzima be-8-30mmd bunokusetyenziswa.
4) Ukulayisha oomatshini: ukothula iipleyiti zamatye okusila, ii-hopper liners, ukubamba iincakuba, iilori zokulahla ngokuzenzekelayo, imizimba yeelori. Oku kufuna iipleyiti zensimbi ezinxibayo ezinganyangekiyo ngokuxhathisa okuphezulu kakhulu kunye nobulukhuni. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iipleyiti zensimbi ezinxibayo kunye nezinto ze-NM500 HARDOX450 / 500 kunye nobukhulu be-25-45MM.
5) oomatshini bokumba umgodi: i-linings, iincakuba, ii-linings zokuhambisa kunye ne-baffles yezimbiwa kunye nezityumzi zamatye. Ezo ndawo zifuna ukumelana nokunxiba okuphezulu kakhulu, kwaye izinto ezikhoyo zi-NM450 / 500 HARDOX450 / 500 iipleyiti zensimbi ezinxibayo ezinokuqina kwe-10-30mm.
6) oomatshini bokwakha: isamente pusher izinyo ipleyiti, ikhonkrithi yokuxuba inqaba, umxube lining ipleyiti, uthuli umqokeleli lining ipleyiti, izitena zomatshini isitena sokubumbela. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iipleyiti zensimbi ezinxibayo ezenziwe nge-NM360 / 400 nge-10-30mm ubukhulu.
7) Oomatshini bokwakha: i-loaders, i-bulldozers, iipleyiti zebhakethi ze-excavator, amacwecwe amacala amacala, iipleyiti ezisezantsi zebhakethi, iincakuba, ukujikeleza kweerandi. Olu hlobo loomatshini lufuna ipleyiti yentsimbi eyomeleleyo ngakumbi kwaye inxibe ukumelana ne-abrasion ephezulu kakhulu. Izinto ezikhoyo yi-NM500 HARDOX500 / 550/600 enobukhulu obungama-20-60mm.
8) Metallurgical oomatshini: intsimbi ore sintering umatshini, ehambisa ingqiniba, intsimbi ore sintering umatshini nqanawa, nqanawa scraper. Ngenxa yokuba olu hlobo loomatshini lufuna ubushushu obuphezulu obunganyangekiyo kunye neepleyiti zentsimbi ezinqabileyo ezinzima kakhulu. Ke kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iipleyiti zentsimbi ezinganyangekiyo zeHARDOX600HARDOXHiTuf.
I-9) Ukunxiba iipleyiti zentsimbi ezinganyangekiyo kunokusetyenziselwa iisilinda zokugaya isanti, iibhleyidi, iiyadi ezahlukeneyo zemithwalo, oomatshini bokugcina kunye namanye amalungu, izakhiwo ezithweleyo, izakhiwo zamavili kaloliwe, imiqolo, njl.
Faka ipleyiti enganyangekiyo, unxibe isitya, unxibe isitya sensimbi
Ukunxiba ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo kubhekisa kwiimveliso zepleyiti ezikhethekileyo ezisetyenziswa kwindawo enkulu yokunxiba imeko.Ipleyiti yesinyithi enganyangekiyo inokumelana ne-abrasion ephezulu kunye nokusebenza kakuhle kwefuthe. Inokunqunyulwa, igobile, idityaniswe, njl njl. Inokudityaniswa nezinye izakhiwo nge-welding, iplagi ye-welding kunye ne-bolt connection, Inempawu zokonga ixesha kunye nokulungeleka kwinkqubo yolondolozo.
Ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwizinyithi, amalahle, isamente, umbane, iglasi, imigodi, izinto zokwakha, izitena kunye namanye amashishini. Xa kuthelekiswa nezinye izinto, kuyabiza kakhulu kwaye kuye kwathandwa ngakumbi ngamashishini nangabavelisi.
Ubunzima be-3-120mm Ububanzi: 1000-4200mm Ubude: 3000-12000mm
Ukunxiba-ukuxhathisa iTheyibhile yokuthelekisa
Egqithileyo Iplate yeNsimbi eNqabileyo yeNsimbi
Okulandelayo: Icwecwe leCarbon Steel
Tube & okoxande Tube